Messi iyo Ronaldo, halkee kaga jiraan Liiska kala Sarreynta Gool dhalinta Horyaalada ay ka kala ciyaaraan ee La Liga iyo Serie A?? – Gool FM
Messi iyo Ronaldo, halkee kaga jiraan Liiska kala Sarreynta Gool dhalinta Horyaalada ay ka kala ciyaaraan ee La Liga iyo Serie A??
Byare December 3, 2018
(Europe) 03 Dis 2018. Lionel Messi Iyo Cristiano Ronaldo oo Tabankii sano ee u dambeeyay xoog ku heystay Abaal marinta laacibka ugu fiican adduunka ee Ballon d’Or ayay caawa u badan tahay inuu ka dhigan doono Luka Modric.
Haddaba ka hor xaflada Caawa ee Ballon d’Or, labada xiddig ee min shanta jeer ku guuleystay kubbada dahabka halkee kaga jiraan liiska kala sarreynta horyaalada ay ka kala ciyaaraan ee La Liga Iyo Serie A.
Cristiano Ronaldo ayaa wacdaro waali ah ka dhigaya horyaalka Talyaaniga isagoona durba la wareegay gool dhalinta horyaalka, oo waxay min 10-gool wada leeyihiin dhaliyaha Genoa ee Krzysztof Piatek, Laakiin CR7 ayaa sameeyay shan caawin ah halka xiddiga kale uusan sameyn wax caawin ah.
Lionel Messi ayaa isna kaalinta 3-aad kaga jira kala sarreynta gool dhalinta La Liga oo wuxuu leeyahay 9-gool inkastuu sameeyay 7-caawin ah.
EEG kala Sarreynta Gool dhalinta SERIE A:
EEG kala Sarreynta Gool dhalinta LA LIGA:
Madaxwaynaha Xiriirka Kubbada Cagta Soomaalia Cabdiqani Saciid Carab iyo midka CAF oo ku wajahan Dalka Eritrea....(Muxuu yahay u jeedka??)
“Ka garab ciyaarista Lionel Messi wax walba waa sahal”